Uthole ukucindezeleka kokukhempa, ngoba ukwelashwa kuyabiza - I-Airbnb
Uthole ukucindezeleka kokukhempa, ngoba ukwelashwa kuyabiza
Guijan, Assam, i-India
Ikamelo e-isikebhe ibungazwe ngu-Barun
I-Dibru Saikhowa National Park ingenye yalezo zindawo eziziqhayisa ngeqoqo elicebile le-flora nezilwane, eziningi zazo zisengozini. Ingenye yamasayithi ambalwa asele avikelekile Endaweni Yezinyoni Engokomlando ye-Assamese Plains.
I-Dibru Saikhowa National Park iyipaki kazwelonke yesiqhingi somfula futhi enye yezindawo ezingu-19 eziphilayo emhlabeni. Le-National Park itholakala amakhilomitha angu-12 enyakatho ye-Tinsukia e-Assam. Ezingxenyeni eziyisikhombisa zepaki, enye iyindawo emanzi futhi enye imbozwe ngokuyinhloko ngotshani nehlathi eliminyene. Impilo yezilwane okufanele ibukwe endaweni yabo yemvelo ihlanganisa i-Royal Bengal tiger, ama-hoolock gibbons kanye nezingwe, iphinde ibe yikhaya lezinhlobo ezithile ezivinjelwe, njenge-White-winged Wood Duck, i-Bengal Florican, i-Lesser Adjutant Stork, i-Pegin ehlotshisiwe, i-White-bellied Heron, i-Pallas 's Fish Eagle, i-Swamp Partridge, i-Jerdon' s Babbler, i-Black-breasted Parrotbill ne-State Grassbird. I-Marsh Babbler, i-Swamp Prinia neYellow Weaver.
Ayikho imigwaqo futhi ayikho i-safari yehlathi noma ukugibela izindlovu zokuzulazula epaki, ngakho-ke ungahlola ipaki ngokuqwala izintaba kuphela, nakuba isevisi yesikebhe itholakala engakuyisa ezindaweni ezihlukahlukene. I-Guijan Ghat ne-Saikhowa Ghat yizindawo zokungena zepaki likazwelonke.
ukulahleka emoyeni wasendle
imibhede eyidabuli engu- 2, Imibhede elala umuntu oyedwa engu-4, imibhede yenetha engu-5